[Ankapobeny ] 21 Jolay, 2009 09:52
Hetraketra-paty (fat) ity!!!
Misy olona ratsy saina eto @ firenena eto hosoram-potaka foana ny etsy @ magro sy ny mpitarika azy h@ izay. Lazaina fa nivarotra tanindrazana t@ daewoo, lazaina fa manompo sampy ihany koa dia napoitra daholo ireto sarin-javatra voasikotra isan-kazarany rehetra. Dia mitohy hatrany ny fanosoram-potaka hatramin'izao fa hoe mpampihorohoro hono ny zanak'i dada e! mahay manapoaka baomba tsy mipoaka ry zareo. LOL Tsy te ho any Adis abeba kay ny anao lahy dia foronona daholo izao rehetra izao. Soa fa ny marina tsy mba maty.
Hiverenako kely ny tantara indrindra ny seho t@ 7 febroary 2009 izay nanaovana sorona ny mpiara mpitolona hanosoram-potaka an'i ravalomanana ihany koa io. Misy ny porofo eo @ sary fa saika voatifitra avy aty afara avokoa ny ankamaron'ny maty t@ io tranga iray io. Ny ampitson'iny ihany moa i Ra8 dia efa nilaza fa hampanao famotorana irasam-pirenena. Raha tena tia ireo mpitolona ireo ny fat tokony efa vita izany famotorana izany mbola tsy misy anefa izany h@izao.
Novonoina ihany koa ireo mpitolona ny ara-dalana ny 28 marsa 2009 tetsy Ambohijatovo nisy ny maty t@ ireo mpitolona kanefa tsy hita ny razana t@ ireny fotoana ireny. Voalaza moa fa nitondra basy ireo mpitolona t@ izay ka mila ravaina ny fihetsehana. Dia efa fomba amapanao ity fanilihina andraikitra ity h@ izao. Nisy ny olana tsy manatsiny notifirin'ilay fiara 4x4 malza izay fa milisy kanefa tsy hita ihany koa izay tena marina t@ ireny mandrak'androany.
Farany izao dia ny baomba tsy mipoaka indray no fitaovana iray hanaovana ilay maritiora ny olona ary efa fatatra fa iza no kendrena sy ho melohina ho nanao izao fomba izao. Dia ny zanak'i dada izany. Raha izany anie no izy dia azo tsorina avy hatrany fa anjely ny mpitondra ankehitriny izany tsy mba misy loto mihitsy ny tanany fa madio be tsy misy tomika mihitsy na dia ny kely akory aza fa ny ankilany kosa dia olona mpamono olona mpanao sorona ny mpiara mitolona aminy sy mpangalatra ary mpanompo sampy. Dia hoy aho oe maninona ary no tsy mba nahazo fitahina avy any ambony ihany ilay fat h@ izao e! Ny marina tsy mba maty.